चार स्थानीय तहमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बन्दै «
चार स्थानीय तहमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बन्दै
एसियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा सुदूरपश्चिमका चार स्थानीय तहमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बन्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारले क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तरगत कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा सो योजनाको काम गरिरहेको छ ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कैलालीले चार वटै स्थानीय तहमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने स्थान छनौट भई डीपीआर तयार भइसकेको जनाएको छ । इकाईका आयोजना प्रमुख प्रविन शाहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिभ्युको काम गरी स्वीकृतिका लागि विभागमा पठाएको जनाए । उनले वातावरण मन्त्रालयबाट सो प्रतिवेदन स्वीकृत भएर आएपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ मा निर्माण हुने एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको डीपीआर र इआईए स्वीकृत भएर टेण्डर आह्वान भइसकेको आयोजना प्रमुख शाहले बताए । उनले सो केन्द्र निर्माणमा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च लागत स्टिमेट तयार भएको बताए ।
यसैगरी गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ चौकी डाँडा सामुदायिक वनभित्र बन्न लागेको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको डीपीआर र ईआईए तयार भएको छ । विभागले ईआईए पुनः गर्न भनेपनि रिभ्यु गरिएको आयोजना प्रमुख शाहले बताए । उनले ६ हेक्टर जमिनमा ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर केन्द्र निर्माण गरिने बताए ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको कृष्णपुर सामुदायिक वनमा ५३ करोड रुपैयाँ खर्चेर एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने योजना छ । आयोजना कार्यालयले डीपीआर स्वीकृत भइसकेको र ईआईए रिभ्यु गरी स्वीकृतिका लागि विभागमा पठाएको जनाएको छ । आयोजना कार्यालयका ईञ्जिनियर पुजन न्यौपानेले टेण्डरसमेत स्वीकृत भइसकेको बताए । उनले ईआईए स्वीकृत हुनासाथ निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने बताए ।
भीमदत्त नगरपालिकामा भने स्थान छनौट भइसकेको छैन । पहिले खोजेको ठाउँमा ईआईए फिट नभएपछि भीमदत्त नगरपालिकाले अर्को ठाउँ खोज्न थालेको ईञ्जिनियर न्यौपानेले बताए । उनले ठाउँ फिक्स नभएकाले डीपीआर बन्न नसक्दा त्यहाँ बन्ने एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको लागतको स्टिमेट पनि तयार भएको छैन ।
सन् २०१५ देखि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा अत्याधुनिक शहरी सडक र एकीकृत फोहर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने गरी क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना लागु गरिएको छ । स्थानीय तहहरुले स्थान छनौट गर्न नसक्दा सो अन्तरगतका योजनाहरु समय भन्दा निकै ढिलो कार्यान्वयन भएका छन् ।
सो केन्द्रहरु बनेपछि ती स्थानीय तहहरुले कुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गरी कम्पोष्ट मल तयार गर्ने छन् भने नकुहिने फोहोरलाई पुनः प्रयोग हुन सक्ने पुनः प्रयोगका लागि पठाउने छन् भने पुनः प्रयोग नहुने फोहोरलाई नष्ट गर्ने छन् ।